Iingcweti ezivela kwiisonyi ngezandla
Iipini kunye neepruce ze-spruce zizinto ezintle kwaye zifikeleleke lula kubantwana bokudala. IiCon zicutshungulwa kakuhle, zigcinwe ixesha elide, kunye nezobugcisa ezenziwe ngamacon, amaqabunga, i-acorns kunye nezinye izinto zendalo zithuba elihle kakhulu kubantwana nabazali babo ukubonisa inkolelo kunye nokucinga. Ukongezelela, izixhobo ezenziwe ngamaconsi ephayini zikhanya kakhulu, ziphantse zizinzi.
Xa ukhiqiza amanqaku ezenziwe ngesandla ngesandla sezandla zakho, kufuneka uqikelele ukuba emva kokumisa banesakhiwo sokuvula. Ukuma kombono akukatshintshi kwaye ayizange ichithe i-craft, kufuneka uqale uyidibanise kwi-glue ye-joiner kwaye uvumele ume. Kwiglue elifudumeleyo iinqununu ziya kuvala, kwaye iglue eyomileyo izakulungisa ngokusemgangathweni isimo. Kule njongo, ungasebenzisa i-PVA glue okanye lacquer.
Isandla esenziwe ngamaconsi "Indlovu uGena"
Iidon pine - 4 pcs.;
Senza umsebenzi wee paws, ngenxa yale nto sibone izibini ezimbini kwiindawo ezimbini.
Ngentloko, thabatha yonke into, kwaye wenze u-incision kuyo kunye nobude besiqingatha.
Kwinqona enkulu kunazo zonke - i-trunk, siya kwenza i groove ngoncedo lwe-awl kwiindawo zokuqhawula intloko kunye ne-paws.
Siza kuqokelela itekisi elenziwe ngesandla. Ukwenza oku, gcwalisa i-glue kwiikhefu kwaye ulungise intloko kunye ne-paws ngemitshi okanye i-toothpicks.
Siza kunqumla intsimbi kunye nomqhina kwi-birch bark, siya kwenza amehlo ukusuka kwisikali se-cones.
Izandla zeekoni "I-Woodcutter"
umgca okanye udoti;
Masenze isilenge esivela entloko. Ukuze senze oku, sinamathele iinwele kwiintambo, sondela amehlo kunye nomlomo, kwaye kwisebe siya kwenza impumlo.
Siza kudibanisa intloko kunye ne-trunk, okwenziwe ekuqaleni kwidon-trunk.
Ukususela kumahlamvu siza kwenza iingalo nemilenze, siwaphule kwixesha elide. Sikulungisa izandla kunye neenyawo emzimbeni ngeglue. Ukususela kwiinqununu zegobolondo ye-pistachio senza iinyawo zethu kwaye sizinamathisele ezinyaweni zethu. Sifaka iqela kwi-stand.
Siza kwenza i-ax ukusuka kumdlalo kunye nembewu yelanga. Ukusuka kwiingqimba ze-birch bark sifaka imithi. Ukuba i-birch bark ayifuni, ke esikhundleni sayo ungasebenzisa iphepha eliphambili okanye ikhadi.
I-Zadekoriruem imele kunye nomsi.
Iidonki ezenziwe ngesandla "Swan"
iphepha levelvet lombala obomvu;
Yenza amaphiko ethu kunye nomsila wethu. Ukuze senze oku, sifaka iintsiba ezimhlophe ezimhlophe kwidonki emacaleni omabini, kunye nentsiba encinane emva kwayo.
Intambo ye-chenille igqityiwe ngesimo se-swan entanyeni kwelinye icala, ngaphambili ephazamisa ngesimo sokujikeleza kwelinye. Glue intamo entanyeni.
Ukusuka kwiphepha levelvet, sinqumla intsimbi-kathathu kwaye sinamathele entloko.
Izandla zamaconsi "Inyoni"
Masenze intloko kwi-berry dogrose. Ngamehlo, lungisa ngocingo lweethusi, ubambe iqhosha leqabunga.
Namathisela intloko kwisihlunu nge-toothpick.
Siza kwenza amaphiko kunye nomsila ukusuka kumagqabi afanelekileyo.
Senza i-paws ukusuka kwizinyopho kunye nokulungisa into eyenziwe ngesandla ngesandla.
Ulungelelaniso lweedonki "I-butterfly"
ibhunge le-birch okanye iphepha eliqingqiweyo;
Cima i-birch bark okanye amaphiko ephepha. Makhe sikhombise ukusetyenziswa kweempawu, sisebenzise umdwebo wesimo.
Kwi-trone-trunk siza kutyumba size silungise amaphiko ngeglue.
Ukusuka kwimigqa yenza amehlo kwaye alondolozwe ngetambo.
Siza kugoba kwi-antennae kunye nemilenze, silungiselela kwisiqu.
Ukwahlukana phakathi kwabantwana abancinci
Indlela yokudweba inamba?
Intetho yeengcali yomntwana
Unokukhawuleza ukufunda njani itafile yokuphindaphinda?
Mainclay kwi plastiki
Ukuphuhliswa kwentetho yokulahla kwabantwana
Ingakanani umntwana kufuneka ayidle kwiinyanga ezimbini?
Indlela yokudlulisela umntwana kwenye inkulisa?
Indlela yokufundisa umntwana ukuba abhale kakuhle?
I-Monopoly - imithetho yemdlalo
Imfundo yezesondo yabantwana
Nini ukumba isanqante?
I-Erysipelas ngeenyawo - izizathu kunye neempawu zonyango
Lucerne - iimpawu ezixhamlayo kunye nokuchasene
Iimvumi ezingama-27 ezingabonwa kuphela eSingapore
ULobio ukusuka kubhontshisi obomvu - iresiphi yeklasi
Iwayini esuka kwi-ashberry ebomvu
Iiladi ezilula ngokukhawuleza
I-opaicure ombre ekhaya
Ukuphululwa kwe-posture kubantwana - izibangela, iintlobo kunye nokulungiswa kovumba
Ama-apricots ebusika - zokupheka zee-workpieces ezihle kakhulu
Usana luphefumula njani kwisibeleko?
Iliso kwiso elibi